नेपालको संविधानमा सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धमा भएको व्यवस्थाबारे लेख्नुहोस् « Nijamati Khabar
१) सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गरिने चिठीपत्रमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के–के हुन् ?
एउटा कार्यालय र अर्को कार्यालयबीच गरिने लिखित व्यवहार चिठीपत्र हो । यो सञ्चारको एक औपचारिक माध्यम भएकाले सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गरिने चिठीपत्रमा विभिन्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
– पत्रसङ्ख्या, चलानी नम्बर, मिति उल्लेख हुनुपर्ने,
– सम्बोधन, विषय, बोधार्थ तथा कार्यार्थ स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने,
– पदाधिकारीको नाम तथा हस्ताक्षर हुनुपर्ने,
– कार्यालयको छाप लगाउनुपर्ने,
– कार्यालयको लेटरप्याडमा चिठीपत्र लेख्नुपर्ने,
– गोपनीयता (गोप्य, अतिगोप्य) तथा प्राथमिकता (तुरुन्त, अति जरुरी, जरुरी) खुलाउनुपर्ने,
– खामबन्दी गरी प्रापक र प्रेषकको ठेगाना लेख्ने ।
२) स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारबारे लेख्नुहोस् ।
गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको गठन गरी सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा गरिएको छ,
जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
क) उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख : संयोजक
ख) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत : सदस्य
ग) कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको सदस्यमध्येबाट एकजना महिलासहित दुईजना सदस्य : सदस्य
घ) निजी क्षेत्रको उद्योग वाणिज्यसम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको गाउँ वा नगर तहको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि : सदस्य
ङ) घरेलु तथा साना उद्योगसम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको गाउँ वा नगर तहको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि : सदस्य
च) कार्यपालिकाको राजस्व महाशाखा, विभाग वा शाखा प्रमुख : सदस्य सचिव
३) नेपालीहरूको जीवनशैली नै नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या हो । यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् ।
निश्चय पनि मानिसको स्वास्थ्य आफ्नै जीवनशैलीबाट प्रभावित हुन्छ । अधिकांश नेपालीहरू स्वास्थ्यको महत्व र यसको ख्याल राख्ने तरिकाबारे सचेत छैनन् । उनीहरूको खाद्य परिकार, सांस्कृतिक चालचलन, कामको पद्धति, आचरण आदि स्वास्थ्यमैत्री छैनन् । अझै पनि धेरै मानिस अन्धविश्वासी छन् र आफ्नो स्वास्थ्य बिग्रँदै गएको थाहा पाएका छैनन् । उनीहरूलाई वैज्ञानिक उपचार पद्धतिको आवश्यकता र महत्वको ज्ञान छैन । खासगरी यस्तो अवस्था सुगमभन्दा दुर्गम स्थानमा बढी छ ।
उत्पादनको कमी, खाद्यान्नको अभाव आदि जस्ता कारणले गर्दा उनीहरू सडेगलेका खानेकुरा, फोहोर खानेपानी प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रसादका नाममा प्रदूषित पानी र सडेगलेका फलफूल तथा खाद्यपरिकार सहर्ष ग्रहण गर्छन् । स्वास्थ्यको ख्याल नगरी अनावश्यक मात्रामा व्रत उपवास गर्ने गर्छन् । खाद्यपरिकार तयार गर्ने पाकशैली पनि उपयुक्तखालको छैन । भोजनको नियमित तालिका छैन । सन्तुलित भोजनको महत्वबोध छैन ।
बढी चिल्लो वा मदिराजन्य वस्तु अधिक प्रयोग हुन्छ । व्यक्तिगत सरसफाइको अवस्था पनि कमजोर छ । यस्तो जीवनशैलीका कारण सामुदायिक स्वास्थ्यको अवस्था निकै नाजुक छ । त्यसैले नेपालीहरूको जीवनशैली नै नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या हो भन्न सकिन्छ ।
४) उच्च शिशु मृत्युदरले जनसङ्ख्या वृद्धिमा कसरी सहयोग गर्दछ ?
कुनै स्थान वा क्षेत्रका प्रतिहजार जीवित जन्मेका शिशुहरूमध्ये एक वर्षभित्र उमेर समूहका शिशुहरूको मृत्यु हुनु शिशु मृत्युदर हो । हाल नेपालको शिशु मृत्युदर करिब ४१ प्रतिहजार रहेको छ । शिशु मृत्युदर उच्च भएमा त्यसको असर शिशु जन्मदरमा पर्छ ।
शिशु मृत्युदर बढी भएमा जन्मदर पनि बढ्छ, किनकि जन्मिएका शिशुहरूको कति मर्ने वा बाँच्ने ठेगान हुँदैन । त्यसकारण वृद्धावस्थासम्म कति सन्तान बाँच्ने हुन् भन्ने निश्चित नभएका कारण बाबुआमाहरू धेरै बच्चा जन्माउन चाहन्छन् । त्यसैले उच्च शिशु मृत्युदर भएमा जन्मदर पनि बढी हुन्छ, फलस्वरूप जनसङ्ख्या वृद्धिमा सहयोग पुग्छ ।
५) बेरोजगारी समस्या जनसङ्ख्या वृद्धिको कारक तत्व हो । कसरी ?
बेरोजगारी काम नपाएको अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा बहुसङ्ख्यक व्यक्ति, मजदुरलगायत श्रमिकहरू सबै काम नपाउँदा हात खाली बस्नुपर्छ । यसरी महिला र पुरुषहरूको ठूलो जमातले अधिकांश समय काम नपाउँदा त्यत्तिकै बिताउनुपर्ने र अन्य मनोरञ्जनको साधन पनि नपाउनेजस्ता कारणले गर्दा मानिसहरू सहवासतर्फ बढी उन्मुख र प्रेरित हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा प्रजननको सम्भावना बढ्छ र जनसङ्ख्या वृद्धि हुन्छ । यसरी बेरोजगारी समस्यालाई जनसङ्ख्या वृद्धिको कारक तत्व का रूपमा लिन सकिन्छ ।
६) नेपालको बजेट तर्जुमा प्रक्रियाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
नेपालमा बजेट तर्जुमा गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ । बजेट तर्जुमामा संवैधानिक व्यवस्था छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियम छ । बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन लागू गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालय बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा क्रियाशील छन् ।
नेपालको बजेट तर्जुमा निम्नानुसार गरिएको पाइन्छ;
(१) व्ययको अनुमान/खर्च अनुमान
७) लेखापरीक्षणका सिद्धान्तहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
आर्थिक कारोबारको जाँच गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने तथा देखिएका कैफियतहरू उल्लेख गर्दै सुझावसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्य लेखापरीक्षण हो । यो आय र व्ययको स्वतन्त्र रूपले लेखाजोखा गर्ने कार्य भएकाले लेखापरीक्षण गर्दा केही आधारभूत मार्गदर्शन अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई लेखापरीक्षणका सिद्धान्त एवम् आधारका रूपमा लिन सकिन्छ ।
जुन निम्न छन् ;
१) नियमितताको सिद्धान्त:
२) मितव्ययिताको सिद्धान्त :
३) कार्यदक्षताको सिद्धान्त :
४) प्रभावकारिताको सिद्धान्त :
अपेक्षित उद्देश्य एवम् लक्ष्य हासिल भयो भएन । त्यसबाट के–कस्तो असर/प्रभाव परेको छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
५) औचित्यको सिद्धान्त :
६) गोपनीयताको सिद्धान्त :
७) स्वतन्त्रताको सिद्धान्त :
८) निष्पक्षताको सिद्धान्त :
९) व्यावसायिकताको सिद्धान्त :
१०) प्रतिवेदनको सिद्धान्त :
८) नेपालको संविधानमा सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धमा भएको व्यवस्थाबारे लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा तीन तहको सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था भएको पाइन्छ, जसलाई निम्नानुसार लेख्न सकिन्छ :
नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने र त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सङ्घीय ऐन बमोजिम हुने,
सङ्घीय निजामती सेवालगायत सबै सङ्घीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा सङ्घीय कानुनबमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने,
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने ।